Jidhka - Youmo
Kroppen - somaliska
Meniiga hoose waxaad ka heleysaa qoraallo, sawirro iyo filimaan ku saabsan jirka.
Dhamaan dadka waxay xaq uleeyihiin in ay go’aan ka gaaraan xaalada jirkooda. Waa xuquuq bani’aadanku leeyahay laakiinse maxay tahay micnaheeda?
Sawiro taxan: Ma jiro wax xuubka bikirka ahi
Lama arki karro lagamana dareemi karro siilka, haddii tusaale ahaan, aad galmo sameysay ama aad isticmaashay tampong (cudbiga dhiiga caadada ka nuuga siilka). Dadka intooda badan ma dhiigaan marka ugu horeysa ee ay galmo sameeyeaan, maxaa yeelay siilku waa uu furan yahay.
Waxa laga yaabaa inaad og tahay in ilmo sameysmi karaan marka ay wiil iyo gabadh isku tagaan. Laakiin miyaad og tahay waxa jidhka gudahiisa ka dhaca?
Soo ridida ilmuhu waxey ka dhigan tahay in la joojiyo uurka. Adigaaga uurka leh ayaa go’aansanaya haddii aad rabto in aad ilmo iska soo ridid. Ma jiraan wax xad ee da’da ilmo iska soo ridida. Ilmo iska soo ridida kama dhigeyso in ay aad u adkaato inaad uur qaado mustaqbalka.
Sawiro taxan: Gudniinka xubinta taranka ee dumarka – xalaaleynta xubinta taranka
Gudniinka xubinta taranka dumarka ayaa waxa sidoo kale loo yaqaanaa xalaaleynta xubinta taranka. Taasi micnaheedu waxa weeye in qof uu gooyey ama uu dhaawacay qaybo ka mid ah xubinta taranka ee dumarka. Waxa jirta caawimo wanaagsan oo la heli karto hadii lagu gudey oo ay taasi caafimaadkaaga wax yeeleyso. FG: sawirro xassaasi ah!
Su’aal: Waxaan ka baqanayaa in aanu dhiig iga imaan marka ugu horeysa ee aan galmo sameeyo. Miyaan qaliin sameyn karaa?
Filim: Kawaran hadii gusku ii kici waayo
Simon waxa uu ka cabsi qabaa in guskiisa uu kici waayo.
Filim: Kubada-cagta, dhiiga-cadada & galmada
Maryam xanuun badan oo dhiiga cadada ah baa haya. Amanda waxay ka warwarsan tahay in ay uur leedahay.